ယောကျ်ားလေးများ အမြတ်တနိုးယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး – Youth Bar
(၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ
(၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေး လိုစိတ် ရှိပြီး ကိုယ့်ထက် အကြီး များအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံ တတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ် များအား အရာရာ နားလည် ထိန်းကျောင်းပေး တတ်သော မိန်းမ…
(၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မ ဝင်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ
(၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ် ကိုင်တတ်သော မိန်းမ ထို အသိဉာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင် များကိုလဲ သားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ…
(၅). ဟိုးအောက်ဆုံး အဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..ယောကျာ်းဖြစ် သူရဲ့ အလုပ် အကိုင် အဆင့်အတန်း….ရာထူး ဂုဏ်ရှိန်ဝါ နဲ့ အညီ လိုက်လျော ညီစွာနေထိုင် ပြုမူ တတ်ပြီး .. ဘယ် ဘဝရောက်ရောက် ပေါင်းသင် းမည့် မိန်းမ….
(၆). မာန်မာန မတက်.. ကြွားဝါးလိုခြင်း အလျဉ်းမရှိ..ရိုးသားဖြူစင်စွာ နေတတ်သော မိန်းမ…
(၇). အချက် အပြုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေး .. မိသားစု ငွေကြေးကို စီမံခန့် ခွဲနိုင်မှု သားသမီး များအား ကြင်နာယူစွာ…အုပ်ထိန်းနိုင်မှု .. စသဖြင့် အခြေခံ မယားဝတ် တရားများအား ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သော မိန်းမ….
(၈). ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသော မိန်းမ
(၉). အကျိုးမ ရှိသော စိတ်ပျော်ရွှင် မှုသက်သက် ..အိမ်အလည် အပတ်များခြင်း အင်တာနက် တွင် အလေလိုက်ခြင်း ..အချစ်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ခြင်း ..ရုပ်ရှင်ကားတွေ ထိုင်ကြည့်ခြင်း… စသည်တို့တွင် လိုတာထက်ပို၍ စိတ်ပါဝင် စားမှု မရှိသော မိန်းမ…
(၁၀). ကိုယ်တစ်ဦး တည်းသာ အရမ်းချစ်သော မိန်းမ